Abriil 2008, kooban ee bisha - Geofumadas
Abriil, 2008 ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, Google Earth / Maps, Internet iyo Blogs, GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley
Bishii Abriil waxay ahayd bilo adag, safar badan, laakiin natiijooyin fiican. Maantu waa maalin maalin walbana la dabaaldego maalinta shaqada ee waxaan rajeynayaa inaan ku nasto.
Halkan waxa soo koobaya waxa dabayaaqada kuleylaha ka tagay tigidhada 45, shan ka badan waxa ay libretto leedahay.
Google Earth, casriyeynta iyo isbarbardhigyada leh codsiyada kale ee la midka ah ... ama midab-takoorka isku midka ah
Halkee laga soo dejisan karaa qaybta cusub ee Google Earth
Ku saabsan codsiyada juquraafi, farshaxanka iyo cadastre
Falanqaynta isbarbardhiga ee GIS Software
AutoCAD, mawduucyada loogu talagalay dadka isticmaala line Line AutoDesk
Blogger weyn ayuu ka fariistaa of AutoDesk
Dhacdooyinka muhiimka ah, AutoDesk, ESRI, Manifold iyo Bentley labaduba waxay leeyihiin wax ku saabsan ajandaha ku dhow.
Talada guud for bloggers iyo Geeks, ka hadlaan dakhligayga ka soo blogging, shuruudaha dhexdhexaad ah iyo in ka badan.
Bilaha 6 ee dakhliga ee Geofumadas
Sidee loo bedelaa faylasha docx si ay u bixiyaan doc
Maalin farxad leh, blogyada 10
Blog Tani waa aniga!
Laga soo bilaabo ajendaha shakhsi ahaaneed, safarka, safarka, iyo safar dheeraad ah.
Maxaa Geofumaados wax cuno
Mowduucyo kulul, yaababka dabiiciga ah waxay u muuqdaan inay yihiin mowduuc iigu keena martida soo dhaweynta ee ku saabsan dalxiiska dhaqanka
Xidhiidhada Taageerada, Si loo dhowro sumcadda content, entries kuwaas oo lagu maamulo hoos bacdi ee Zync iyo Reviewme ... qayb ka mid ah lacagaynta tijaabo of blog this ah, xaqiiqda ah in ay aan la maalgaliyo macnaheedu ma ay dan ... oo lagu arkay halis ah.
Christopher Columbus version 2008
NewsGPS.com, blog ah ayaa loogu talagalay GPS
Post Previous«Previous Bilaha 6 ee dakhliga blogga
Post Next Seminar on Cadastare Real Estate ee BoliviaNext »